post modern | လမ်းအိုလေး
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေမှာပါပဲ – အခန်း (၂၆ – ၃၁) (ခင်မောင်ရင်)
“ငါ့ဘ၀မှာ တစ်သက်လုံး နှစ်ခါပဲ ကြုံဖူးခဲ့တယ်။ ငါ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ငါ့ရဲ့ အလွန် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် ငါ့ရဲ့ အလွန် ဝမ်းနည်းခြင်း”
“မင်း ပန်းချီကားကိစ္စ၊ အတုဖန်တီးထားတာကို တွေ့ရတာက ဒုတိယ။
ပထမ, သဗ္ဗညုဘုရားရဲ့ အရှေ့ဖက်ကစေတီမှာ ငါတို့ ၁၉၅၆ခုနှစ်က တွေ့ခဲ့တဲ့ ကချေသည်နှင့် ဗုံတီးသူ (The Dancer and The Drummer) ဆိုတဲ့ စဉ့်ကွင်းနှစ်ခု။ ငါ ဆယ်နှစ်ကြာလို့ ပြန်သွားတော့ ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒါ … အဲဒါ … ငါ့ရဲ့ အသက်ထက် စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ အခုထိ စိတ်ဆင်းရဲနေခြင်း၊ အဲဒီနှစ်ခုကို အခု ငါပြန်လိုချင်တယ်။ ငါတို့၏ Dancer နှင့် ငါတို့၏ Drummer သည် ငါတို့၏ အသည်း၌ အမြဲရှိနေလေ၏။ ငါတို့ဆိုသည်မှာ ငါတို့ ဗိသုကာကျောင်းသားများ။ အခုတော့ ဒါတွေမရှိတော့။ အခုတော့ ဒါတွေ ဘယ်သူ ပြန်လုပ်မှာလဲ”။
အခန်း(၂၆) … မှ
Categories: Novellas, Post Modern, Prose | Tags: ခင်မောင်ရင်, နောက်ဆုံး, ၀တ္ထု, Eventually Left Alone, Khin Mg Yin, Novellas, post modern | Permalink.
ကဗျာဟာ “ပင်မှည့်”လား “ဖွဲ့စပ်”လား (ဇေယျာလင်း)
Categories: Articles | Tags: article, ကဗျာဘ၀ ရှာတော်ပုံ, ဘာသာပြန်, ဇေယျာလင်း, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
(ဤအရာသည် ငြမ်းများတည်ဆောက်မှုဖြစ်၏) (ဤအရာသည် ယာယီသာဖြစ်သင့်သည်) (ဒိုမီနိုသက်ရောက်မှု) (ထိုအကြောင်းအရာသည် မေ့လျော့ခြင်းခံခဲ့ရသည်) (ထိုအရာသည် ကုန်လှောင်ရုံထဲ၌ရှိခဲ့သည်) (ထိုနေရာကို မည်သူမျှမသိပါ) (ထိုအရာသည် ပြိုလဲသစ်ပင်များ စုပုံထားသောလမ်းဖြစ်သည်) (၎င်း၏ ရေမြောင်းငယ်များအား သင်မြင်တွေ့ နိုင်ပါသည်) (သူတို့ လက်ဗွေများ ထားရစ်ခဲ့သည်) (သူတို့ဒေါ်လာငွေနဲ့ အတူတုန်လှုပ်နေကြ) (ဘယ်သူမှ သီးခြားအရောင်တွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ကြလောက်ဘူး) (သူတို့ဟာမတူတဲ့ အရာတွေကိုကွဲပြားတဲ့လူတွေဆီ ပို့တယ်) (ကံတရားအတွက်) (သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်း) (ချက်ချင်းရပ်ပစ်) (ရောင်းရန် အသားများ) (လတ်ဆတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံ) (အင်းဆက် ကင်းသော) (ငါးမွေးကန်) (လရောင်ထိန်းချုပ်မှု)
(ထိုအရာက အမည်သတ်မှတ်ခြင်းကင်းခဲ့) (ဘယ်သူမှ လှလှပပ အသေးစိတ် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလုပ်ရမယ်မသိကြဘူး) (အဲဒါဟာ ဒုံးအမြှောက်ဆံလို ခံစားရသည်) (င်္သချိုင်းဂူတွေလို လေးလံကြီးမားသည်) (လူတိုင်းရဲ့ ဥာဏ်ပညာကို ထိုအရာက စစ်ယူခဲ့ပြီး) (ငါတို့မှာ သွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာရှိခဲ့တယ်) (ငါတို့ အမြင့်ကြီးအပေါ်ကိုပျံတက်နေခဲ့တုန်း) (ငါတို့ရဲ့အစွန်းထွက်များက ကောက်ကွေ့နေခဲ့ကြ) (ငါတို့ဟာ ဗွက်အိုင်တွေလို ရှိခဲ့ကြ) (ဘာလီဖျော်ရည်ထဲကိုသကြားတွေ ပျော်ဝင်သလို ငါတို့ခံစားရ) (ထိုအရာဟာ ကိုင်တွယ်ရန် လေးလံနေခဲ့) (ငါတို့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ဖုန်းကွယ်ခြင်း ခံခဲ့ရ) (အဲဒါ အလှကုန် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့) (သလင်းကြယ်သီးတွေလို) (ငါတို့ဟာ ငါး။ ပြီးတော့) (ငါတို့လှေကားတွေကို ငါတို့လိုခဲ့) (အတော်များများ
Categories: Kabyarz, Post Modern | Tags: ဘာသာပြန်, ဇော်ဇော်ထွန်း, Dara Wier, Kabyarz, lanolay, post modern, zaw zaw htun | Permalink.
သဘာဝသမိုင်း ပြတိုက်မှူး (ဇေယျာလင်း)
(မြန်မာခေတ်ပြိင်ကဗျာ လျှပ်တစ်ပြက်ရုပ်ပုံလွှာ – အေဒီ ၂၀၀၃)
Categories: Kabyarz | Tags: ဇေယျာလင်း, Kabyarz, lanolay, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.
ပို့စ်မော်ဒန် သီဝရီများ (ဇော်ဇော်အောင်)
ပို့စ်မော်ဒန် သီဝရီများ (ဇော်ဇော်အောင်) [1.2MB]
Categories: Articles, PDFs, Post Modern | Tags: ဇော်ဇော်အောင်, PDF, post modern, zaw zaw aung | Permalink.
နယ်နမိတ်များကို လေ့လာခြင်း (ဇေယျာလင်း)
နယ်ခြားမျဉ်းသူ / သား။ အချို့ ဘယ်တော့မှ အရွယ်ရောက်မလာကြပဲ ‘ဘွန်ဆိုင်း’စိတ်ပုလေးတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ဂျစ်ပ်စီလှည်းတွေရဲ့ အရက်စော်နံ သီချင်းတွေ တထောင်းထောင်းထ။ ဘယ်လရောင်အောက်မှာမဆို ဒဏ္ဍာရီတွေဟာ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားကြတယ်။ ဥပမာ ‘အချစ်’။ မျက်လုံးနောက်ကွယ်က ရုပ်ရှင်ပြစက်ဟာ မသွားတစ်ချက် သွားတစ်ချက်။
အရည်အသွေးတွေရဲ့ မျှခြေဟာ လူကြီးလူကောင်းဖြစ်မှုရဲ့ ကွန်ဆက်ဗေဒ ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လား။
“အနှစ်သာရဟာ စတိုင်ကို ဖုံးလွှမ်းရင် ကြမ်းတမ်းတယ်
စတိုင်ဟာ အနှစ်သာရကို ဖုံးလွှမ်းရင် အသေးစိတ်တွေကို စိုးရိမ်မှုလွန်တယ်
အနှစ်သာရနဲ့ စတိုင်ဟာ မျှခြေကိုရောက်ရင် လူကြီးလူကောင်းမြင့်မြတ်မှုပေါ်တယ်”
ရသဗေဒရဲ့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်မှုကို သံစုံသီးပင်ထဲမှာ တွေ့ဖူးတယ်ရေသောက်ခြင်း၊ အစားစားခြင်းနဲ့ လဲလျောင်းခြင်းဟာ ပျော်ရွှင်မှု ရှာတွေ့နိုင်တယ်
လက်ဆပ် Lexus ကားစီးရင်း ရှုံးနိမ့်မှုကိုလျှော်ကြေးတောင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ
ဝေဖန်ရေးဆရာတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခြားနားမှုကို ဒီမိုကရေစီပြုကြပါတယ်။
ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းရှင်ရင် သူ့ရဲ့ရည်ရွက်ချက်ကို နားလည်ပေးပါ
သူသေရင် သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ စောင့်ကြောင့်ပေးပါ၊ စောင့်ကြည့်ပေးပါ။
သူငယ်ချင်းရှာဖွေမှုဟာ အကူအညီဖြစ်သလို အန္တရာယ်လည်းဖြစ်တယ်
(ခင်ဗျားက အဓိပ္ပါယ်ကို ခွက်တစ်ခုလို အသုံးချချင်တာကိုး !)
Categories: Conceptual, Kabyarz | Tags: ငြိဏ်းဝေ, Kabyarz, Nyein Wai, post modern, post-structural | Permalink.
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေမှာပါပဲ – အခန်း (၂၆) (ခင်မောင်ရင်)
“ငါ့ဘ၀မှာ တစ်သက်လုံး နှစ်ခါပဲ ကြုံဖူးခဲ့တယ်။ ငါ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ငါ့ရဲ့အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် ငါ့ရဲ့အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်း”
ပထမ, သဗ္ဗညုဘုရားရဲ့ အရှေ့ဖက်ကစေတီမှာ ငါတို့ ၁၉၅၆ခုနှစ်က တွေ့ခဲ့တဲ့ ကချေသည်နှင့် ဗုံတီးသူ (The Dancer and The Drummer) ဆိုတဲ့ စဉ့်ကွင်းနှစ်ခု” …
Categories: Cover Arts, Novellas, Prose | Tags: ခင်မောင်ရင်, ပေါ်ဦးသက်, ၀တ္ထု, Cover Art, Eventually Left Alone, Khin Mg Yin, lanolay, Novellas, post modern | Permalink.
အက်ရ်ှဘရီ အင်တာဗျူး – ကဗျာဆိုတာ ဘာ (ဇေယျာလင်း)
DK – ခင်ဗျားရဲ့ ကဗျာထဲမှာ မေးခွန်းနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတယ်။ အဲသလို မေးခွန်းနဲ့ အဆုံးသတ်ပုံမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားမရေမရာ၊ မသေမချာမှုကို ပြတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ အဆုံးသတ်ဟာ ကဗျာအတွက် ဘာအကျိုးထူးသလဲ
JA – အဲဒါတော့ ကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။ အဲသလို အဆုံးသတ်ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကဗျာာတစ်ပုဒ် စရေးရင် ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မယ် ဆိုတာကိုလည်း ရေးနေတုန်းမှာ မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မရတာမျိုး၊ ‘အတွေ့အကြုံ’ တစ်ခုခု အနေနဲ့ ကဗျာကို တံခါးပိတ်‘ချိတ်’လုပ်သလိုမျိုး မဖြစ်သွားတာကတော့ သေချာတယ်။ အဲသလိုမျိုးတွေပဲ ကျွန်တော် များများရေးဖြစ်လား မသိပါဘူး။ တစ်ခါတုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ (၁၉)ရာစု ဂျာမန်ကဗျာဆရာ ဟို(လ်)ဒါလင်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို comma နဲ ဆုံးထားတာ တွေ့ရတော့ ကျွန်တော် သဘောကျလွန်းလို့ အဲဒီပိတ်နည်းကို ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။
Categories: Articles | Tags: ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီ, ဂျွန်အက်ရ်ှဘရီနိဒါန်း, ဇေယျာလင်း, John Ashbery, post modern | Permalink.